Ciidamada Xukuumada Ethiopia Oo Dad Rayid Ah Ku Xasuuqay Xarun Internetka Laga Isticmaalo.
Madaxweynaha DFKMG Yuusuf Oo Mar Kale Ku Celiyey In Shirku U Dhacayo Qabiilooyinka Soomaaliyeed .
Ciidamada xukuumada ethiopia ee ku sugan magaalada caasimada ee muqdisho ayaa ku diley dhalin yaro ku jiray xarun internetka laga isticmaalo oo ku taala agagaarka ex-cantarol.
Ilaa ku dhowaad 3-nin oo dhalin yaro ah ayaa waxaa ciidamada ethiopia ku dileen meel ganacsi oo laga isticmaalo internetka ,halkaasoo ay u gaysteen jidhdil xoogan islamarkaana rasaas madaxa kala beegsadeen ,arintan oo ka dhalatay markii uu halkaasii kolonyo baabuur ah oo maraysay oo wateen ciidamada ethiopia uu ku qarxay goobtaas islamarkaana uu halkaas ku gubtay gaari nooca ciidamada qaada ee loo yaqaano Uralka.
Baabuurkan oo ay ku qaraxday miinada la hago ayaa sida ay sheegeen dad xog ogaal ahi waxaa ciidamadaasi ka daateen baabuurtii ay wateen islamarkaana waxay ku faafeen agagaarka xaafadaasi halkaasoo ay galeen xaruntan ganacsi ee laga isticmaalo internetka taasoo ay ku dileen 3-da wiil ee dhalin yarada ahaa sida ay saxaafada u xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah oo magacooda qariyey.
Ciidamada ethiopia ayaa badanaaba ka aargoosta dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan marka ay ay xoogaga kasoo hor jeeda joogitaankooda ay waxyaalaha qarxa u dhigaan ama iska hor imaad dhaco .
Maaha markii ugu horaysay ee sidan oo kale ay ku xasuuqaan dad rayid ah ciidamada ethiopia bishan bartamaheeda ayay ahayd markii ay ku dileen sadex wiil oo walaalo ah agagaarka ex-kuliyadii ciidamada ee jaalle siyaad ,kadib markii halkaasi ay gaari nooca Uralka ah miino kula qaraxday .
Madaxweynaha Dowlada KMG ah C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa shaaca ka qaaday in shirka lagu wado inuu dhaco bartmaha bisha july ee fooda inagu soo haysa in lagu wada hadal siin doono beelaha soomaaliyeed.
Madaxweynaha DFKMG yuusuf oo la hadlayey warbaahinada muqdisho ayaa sheegay inuu shacabka soomaaliyeed u sheegayo inuu shirkani u dhici doono beelaha soomaaliyeed ,islamarkaana uu ka codsanayo inay taageeraan ,isagoo carabka ku dhuftay in sanad guurada xoriyada soomaaliyeed ee ku aadan 1-da july loo qaban doono munaasabad weyn .
"waxaan u sheegayaa umada soomaaliyeed in shirka dib u heshiisiinta uu yahey mid lagu heshiisiinayo qabiilaadka Soomaliyeed ee uusan aheyn mid siyaasadeed ama loogu talo galey xisbi iyadoo oo xisbiyadu iyo ururada siyaasadeedaba horey ugu soo heshiiyeen Dowlada haatana Dhisan ee DFKMG" ayuu yiri Madaxweyne yuusuf .
C/laahi yuusuf oo arimo dhinacyo badan taabanaya ka hadlay ayaa sheegay in magaalada la xasilyo islamrkaana la joojiyo qaraxyada iyo dhibaatada waa siduu hadalka u dhigaye islamarkaana uu og yahay inay dadka kasoo hor jeedaa ay doonayaan in 5-ta sano amaan xumada lagu dhameeyo .
'' waan ogahay dadka iga soo hor jeedaa inay isleeyihiin sidaa ugu dhameeya 5-ta sano laakiin ka yelimayno kana caajisimayno ilaa intaan ka xasilinayno waana in dhibaatada laga shaqaynayo la joojiyaa '' ayuu yiri yusuf
Sidoo kale mar uu ka hadlayey dhinaca gobolada jubooyinka ayuu xusay inuu aad uga walaacsan yahay islamrkaana sheegay inay kismaanyo joogaan kuwo xiriir la leh shabakada Al-qaacida oo hadba shaar soo qaata ee magacyada cusub la baxay Muqaawino ,Al-ansaar iyo kuwo kale .
Si kastaba ha ahaatee hadalkan madaxweynaha DFKMG yuusuf ayaa kusoo beegmaya xili ay ku kala afkaar duwan yihiin gudiga shirka dib u heshiisiinta iyo isaga islamarkaana uu xili uu saxaafada la hadlayey xuseen xaaji bood oo kamida siyaasiyiinta muqdisho uu ka dhawaajiyey inay siyaasadi is hayso laakiin aysan jirin wax beelo ah oo xiligan is dagaalsan .
Faafin: SomaliTalk.com | June 30, 2007
G/Bari waxaa halkii maalin ka soo xeroota lacag dhan 1.5 bilyan, laakiin waa la musuqmaasuqay
Colaad Maxamed Siciid oo saxaafadda la hadlay.. Jun 30
Minneapolis: xaflaf qalin jebin iyo koobka cayaaraha ee usbuuca Soomaalida
Barre Hiiraale "C/llaahi Yuusuf ayaa ka dambeeyey in qarax la ii gaysto"
.Dil loo gaystay Guddoomiyihii waaxda koowaad ee Dayniile
.Mareykanka oo loo gudbiyey dacwad ka dhan ah Geedi.
.Qarax lala beegsaday gawaari ay lahaayeen ciidamada..
Wararka oo dhan ka akhri halkan... Jun 29